निन्द्रा मात्र लाग्छ ? के हो यो रोग ? उपचार कसरी गर्ने ?  BikashNews
निन्द्रा मात्र लाग्छ ? के हो यो रोग ? उपचार कसरी गर्ने ?
२०७५ फागुन १४ गते १७:४९ विकासन्युज
काठमाडौँ। धेरै मानिसहरुलाई जुन समयमा पनि शरीर थकित भएको महसुस हुनुको साथै निन्द्रा लाग्ने समस्या हुन्छ। निन्द्रा धेरै लाग्दा मानिसहरुले अल्छि भन्ने गर्छन् तर यो पनि एकप्रकारको समस्या नै हो। वैज्ञानिकहरुका अनुसार दिउँसो मध्यान्हमा मानिसको सरीरमा उर्जाको मात्रा कम हुने गर्छ । उर्जाको मात्रा कम हुनाले नै मानिसलाई दिउँसोमा अल्छी लाग्ने र सुत्न मन लाग्ने हुन्छ।
दिउँसो केहीबेर सुत्नु नराम्रो होइन तर यदि जुनाइ समयमा पनि धेरै निन्द्रा लाग्छ भने त्यो स्वास्थ्य समस्याको एउटा कारण हो । त्यसैले दिउँसो धेरै निन्द्रा लाग्ने समस्यालाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यो धेरै कारणले लाग्ने गर्दछ। धेरैमा यो वंशानुगत हुने गर्दछ र वंशानुगत हुँदा यो समस्या आफ्नो परिवारको मानिसलाई सम्झाउन सजिलो हुन्छ तर जब अन्य कुनै कारणले गर्दा तपाईलाई यो समस्या हुन्छ भने तपाईले यो कुरा अरुलाई बुझाउन मुस्किल पर्ने गर्दछ।
यस्तो धेरै निन्द्रा लाग्ने समस्या मध्य एक हो नारकोल्याप्सी। नारकोल्याप्सी भन्ने यस्तो निन्द्रा लाग्ने समस्या हो जुन तपाईं राती जति पर्याप्त सुते पनि दिउँसो कुनै पनि समयमा पनि तपाईलाई उभिरहेकै अवस्थामा पनि ठाडै निन्द्रा लाग्ने गर्दछ। यसमा तपाईलाई हाइ काढ्ने, निन्द्रा लाग्य जस्तो हुने हुँदैन, यसमा तपाईंलाई तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीं अचानक गहिरो निन्द्रा लाग्ने गर्दछ जसकारण विभिन्न प्रकारको दुर्घटना पनि हुनसक्छ।
भिटामिन बि-१२ कम भएको कारण पनि यो समस्या देखिने गर्दछ।
शरीरमा रगतको कमि अथवा आईरनको कमीले पनि यो समस्या हुने
महिनावारी अथवा गर्भावस्थामा समयमा अत्याधिक रक्तश्राव भएको कारणले पनि अत्याधिक निन्द्रा र थकान महसुस हुने गर्दछ।
-थाईरोईडमा कम हर्मोन उत्पादन हुन्छ भने शरीर एकदम थकित हुने गर्दछ।
यसको समस्या अत्याधिक देखियो भने तपाईंले डाक्टरसँग भेटेरै सल्लाह लिएर औषधी नै लिनुपर्ने हुन्छ। नियमित औषधी सेवन गरे यो समस्या निको हुन्छ। त्यसबाहेक यो समस्यालाई कम गर्न तपाई कफी को दिउँसो सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। कफीको राती प्रयोग भने नगरनु होला। फेरी निन्द्रा नलागेर अन्य थप समस्या थपिन सक्छ।
यस्तै तपाईंले सामान्य जिवनशैली तथा आनिवानीमा सुधार गर्ने, पर्याप्त व्यायाम गर्ने, तथा सन्तुलित भोजन गर्ने गरियो भने दिउँसोमा बढि निन्द्रा लाग्ने समस्या हटाउन सक्नुहुन्छ तर दिउँसोको समयमा निकै धेरै अल्छी लाग्छ र माथि उल्लेखित कारणहरु मेल खाँदैनन् भने पनि गम्भीर हुनुहोस् । यसको अर्थ अन्य केही खराबी छ भन्ने हो। त्यसको लागि पनि तपाईले चिकित्सकको परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
कोरिया जानेको लर्काे, ३ दिनमै भरे ६२ हजारले फारम
आईएमएस लिटिल स्माइल्स्को शोरुम सिटी सेन्टरमा, विश्व विश्व प्रशिद्ध ब्राण्डका उत्पादन पाईने